Isizathu Sokuba Sibuye Sibuye Sishintshe Isizinda Sethu Sibe iMartech.zone | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 29, 2017 ULwesine, May 7, 2020 Douglas Karr
Igama elithi blog liyinto ethokozisayo. Eminyakeni edlule, ngenkathi ngibhala Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies, Ngangilithanda leli gama blog ngoba ichaze umuzwa wobuntu kanye nokwenza izinto obala. Izinkampani kwakungasadingeki zithembele ngokuphelele ekuphakamiseni izindaba ukuveza isiko lazo, izindaba, noma intuthuko. Babengasakaza labo ngaphandle nge-blog yabo yezinkampani futhi bakhe umphakathi ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana enanela uphawu lwabo. Ngokuhamba kwesikhathi, bangakha izithameli, umphakathi, kanye nokukhuthaza.
Izinkampani zikwazile ukwaba lolu lwazi ngaphezu kwezakhiwo zabo (imidiya ephethwe), noma kunjalo. Banamathuba amahle kakhulu okuthi izwi labo lizwakale nakwezinye izincwadi (imidiya etholakele). Kokubili, kunjalo, kunethuba lokwabiwa (social media) noma ikhokhwe futhi iphakanyisiwe (imidiya ekhokhelwayo). Isikhathi Ukubhuloga Kwebhizinisi bekukhawulela, kanye nesikhathi Ukukhangisa Okuqukethwe uhole eminyakeni emihlanu eyedlule ekuhlanganiseni amasu izinkampani ezazihambisa ngemithombo yezindaba ephethe, ezuza abezindaba, imithombo yezokuxhumana kanye nemithombo yezindaba ekhokhelwayo. Kuyathakazelisa ukuthi ibinencwadi efanayo kodwa ibibizwa ngokuthi yi-Content Marketing for Dummies… ibizokuma isikhathi eside. Kepha igama blog kukhawulelwe isikhathi sayo sokuphila.
Igama lesayithi lethu labizwa nge- Martech Zone nge-URL marketingtechblog.com. Bengikwenza into efanayo kusayithi lami ebengiyenzile ngencwadi yami. Isikhathi blog kwaveza izimpendulo ezifanayo. Isikhathi blog kuzwakale sekukhulile, kwenziwe ngezifiso, hhayi njengobungcweti. Bengibhekisa kusayithi ngokuqhubekayo njenge- ncwadi. Abanye babiza amabhulogi abo njenge omagazini bedijithali. Kodwa-ke, ngesaba ushintsho lwesizinda ngenxa yazo zonke iziphathimandla zenjini yokusesha engangizakhele kuleso sizinda, ngakho-ke angizange ngibe nesibindi sokuyibuyekeza. Kuze kube muva nje, lapho iGoogle iyeke ukujezisa ukuqondisa kabusha futhi yaze yangeza i- indlela yokushintsha kwesizinda kukhonsoli yosesho.
Kwakunzima nokuthi sihlanganyele isizinda sethu. Bekufanele ngaso sonke isikhathi sisho ukumaketha-tech-blog-dot-com bese siyipela kubantu lapho sixoxa ngakho. Kwakungesona isizinda esivele sivele olimini futhi kube lula ukuhumushela ku-URL umuntu angayikhumbula futhi ayithayiphe kusiphequluli. I-Martech isibe yisikhathi esamukelekayo embonini yezobuchwepheshe nezixazululo ezihlobene nokuthengisa nokumaketha.
Ngiseshe kaninginingi ukuthola izizinda ezihlobene ne-martech ezingatholakali okulula ukuzikhumbula… futhi ekugcineni zenzeka Indawo yeMartech (futhi sine-marketing.technology kepha yinde impela leyo).
Ukwethulwa Martech Zone
Sisize izinkampani eziningana ukuthi zithuthele ezizindeni ezintsha futhi sabuka amazinga azo agcina esejwayelekile futhi abuya. Kwakuyisikhathi sokuthi nathi senze okufanayo ngakho ngakhipha ipulaki - ngemuva kweminyaka eyishumi - ngoLwesihlanu. Kube kakhulu ukufuduka okulula konga izinto ezimbalwa:
Ungamangala ukuthi uyisebenzisa kangaki eyakho igama lesizinda kumaphrofayli nakumasayithi wesithathu! Ngicabanga ukuthi ngiyisebenzise kumashumi ezinkulungwane zamasiginesha wesayithi nezindawo zokubhalisa. Lokhu kube wukuvula iso kwangempela!
Izixhumanisi zethu zakudala nesizinda kwakungemuva kwe- Isitifiketi se-SSL. Ngenxa yalokhu, asikwazanga ukumane siphonse ama-alias kusayithi lethu bese siqondisa kabusha abantu. Bekufanele sisingathe isiza sesibili ngesizinda sethu esidala, sifake isitifiketi, futhi siqondise kabusha unomphela kusizinda esisha. Kungadingeka futhi ukuthi sikwenze lokhu ngezithombe njengoba sinama-URL athile abhekiswe kuwo nge-imeyili nangezinhlelo zokusebenza zeselula. Ngisabheka umthelela.
Silahlekelwe yikho konke okwethu izixhumanisi zokwabelana ngezixhumanisi zenhlalo. Angikhathazekile kakhulu ngalokhu, futhi sayeka ukwazisa ukubalwa kwamasheya. Kuyangimangaza ukuthi awekho amapulatifomu afushanisa nezinkundla zokuxhumana ezilandela isixhumanisi njengoba kwenza izinjini zokusesha. Kubukeka sengathi ukulandela ama-URL kungaba yinto enhle ukuqoqa idatha yabo.
Ngakho-ke unayo! Manje sesiqondanisa zonke izakhiwo zethu namasayithi ezenhlalo ukufaka uphawu olusha… lwethu Ukushicilelwa kweMartech, yethu Martech Zone Izingxoxo Podcast, neziteshi zethu zomphakathi zeMartech (bona ukuthi thina ushintshe i-Twitter ngaphandle kokulahlekelwa ngabalandeli)!
Farewell Martech Zone futhi sawubona Martech Zone!
Tags: Ukufaka uphawuisizinda esiguqukayoukubhuloga ezinkampani kwama-dummiesushintsho lwesizindaI-Marketing Tech Blogibhulogi lobuchwepheshe bokumakethayezimakethemartechi-martech blogmartech zoneukuqondisa kabusha okuphakadeseo
Jan 29, 2017 ngo-8: 08 PM